Jarmalku waxay yiraahdeen auf Wiedersehen inuu habsado oo is gacan qaado adduunka cusub ee ka dambeeya COVID-ka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Jarmalku waxay yiraahdeen auf Wiedersehen inuu habsado oo is gacan qaado adduunka cusub ee ka dambeeya COVID-ka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Education • Jarmalka Jebinta Wararka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Jarmalku waxay yiraahdeen auf Wiedersehen inuu habsado oo is gacan qaado nolosha cusub ee COVID-ka danbe.
Infekshannada COVID-19 ee Jarmalka ayaa kor u kacay heerkii ugu sarreeyay usbuucii la soo dhaafay, in kasta oo la hirgeliyay sharciyo adag oo kordhiyey cadaadiska dadka deggan si ay isu tallaalaan.
Hessians waxay sii wadi doonaan inay ka fogaadaan inay isku duubaan kuwa ay jecel yihiin xitaa ka dib dhamaadka cudurka faafa ee coronavirus.
Inta badan dadka ra'yiururinta la sameeyay ayaa sheegay in aysan mar dambe gacan qaadi doonin dad aysan garanayn.
Ku dhawaad ​​rubuc ka mid ah jawaabeyaasha sahanka kuma martiqaadi doonaan dadka soo booqda guryahooda xitaa ka dib aafada.
Sahan dhowaan la sameeyay, ku dhawaad ​​saddex meelood meel dadka deggan gobolka Hessen ee Jarmalka, ayaa sheegay inay sii wadi doonaan inay ka fogaadaan inay isku duubaan kuwa ay jecel yihiin. Ra'yi ururintu waxay muujisay in 39% Hessians ay sidoo kale si joogto ah u joojin doonaan inay gacan qaadaan qof kasta, 64% kuma gacan qaadi doonaan shisheeyaha, xitaa marka uu dhammaado masiibada COVID-19.
Ku dhawaad ​​rubuc ka mid ah dadka Jarmalka ah ee la waraystay, ama 23%, ayaa sheegay in aanay doonayn in ay ku martiqaadaan dadka soo booqda guryahoodii nolosha masiibada ka dib.
Natiijooyinka sahanka ayaa si xun u muujinaya saamaynta joogtada ah ee masiibada COVID-19 ku yeelan doonto isdhexgalka aasaasiga ah ee aadanaha, oo ay ku jiraan muujinta kalgacalka kuwa ay jecel yihiin.
Sahankan ayaa sidoo kale daaha ka qaaday in 46% 1,000-ka qof ee ka jawaabay aanay aadi doonin riwaayadaha, filimada ama dhacdooyinka kale ee waaweyn ee gudaha.
40% jawaab bixiyaasha ayaa sheegay inay ku tala jiraan inay xidhaan maaskaro qalliin xaaladaha qaarkood, sida marka ay baska raacayaan ama wax ka iibsanayaan dukaamada waaweyn, xitaa ka dib markii masiibada COVID-19 dhammaatay.
Saraakiisha magaalada Gelnhausen, oo ah magaalo Hessian ah oo qiyaastii 40 kiiloomitir bari ka xigta Frankfurt, waxay baajiyeen qorshayaashii suuqa kirismaska ​​​​ee sanadkan sababtoo ah caabuqyada Covid-19 oo sii kordhaya. "Aad ayaan uga xunahay taas, laakiin kama jawaabi karno dhacdadan oo kale marka loo eego dhacdooyinka sare," Duqa Daniel Christian Glockner ayaa yidhi.
Caabuqa COVID-19 ee gudaha Germany kor ayuu u kacay heerkii ugu sarreeyay usbuucii la soo dhaafay, in kasta oo la hirgeliyay sharciyo adag oo kordhiyey cadaadiska dadka deegaanka si ay u tallaalaan.
Si kastaba ha ahaatee, dadaallada yaraynta gabi ahaanba laguma guulaysan. Tusaale ahaan, dad lagu qiyaasay 24 qof ayaa lagu soo waramayaa in uu ku dhacay COVID-19 bandhig faneed dhawaan lagu qabtay Freigericht, in kasta oo daawadayaasha aan la tallaalin laga mamnuucay ka qeybgalka.
Nofeembar 13, 2021 at 00: 55
Muddo sannad ah ayaa laga joogaa markii la muujiyay in gacan-qaadka aanu faafin covid. Waxaan filayaa in Jarmalku ay yihiin kuwo aad u gaabis ah.